တရုတ် Thermal လွှဲပြောင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Minhui အလင်းအား
MH Series- Aluminate အခြေပြု
MH-W က Series- waterproof
အရောင်အသွေးစုံသော MT Series-
က MS Series- ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်-အခြေပြု
MH-Y ကို Series- လွယ်ကူစိတ်လှုပ်ရှား
ကြွေထည်နဲ့ Glass ကိုများအတွက် MC Series-
self-ကော် PVC ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
self-ကော် acrylic ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
ဖြာထွက် PVC တင်းကျပ်စာရွက်
အလင်းအား IMO SOLAS သင်္ကေတပြ
Photoluminescent Reflecitve အထည်အလိပ်
Photoluminescent Reflective ရာဇမတ်ကွက်
MHG Series- Aluminate အခြေပြု
Photoluminescent ပလတ်စတစ် Masterbatch
အပူလွှဲပြောင်းစီးရီး photoluminescent Self-ကော်ရုပ်ရှင် Minhui ပူအရည်ပျော်နှင့်အတူရောနှောနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့်စထရွန်တီ aluminate ဖြာထွက်ခြယ်ပစ္စည်းကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန် Tran ရှိပါတယ် ...
FOB စျေးနှုန်း: GET LASTEST PRICE
FOB စျေးနှုန်း: အမေရိကန် $ 4-50 / စတုရမ်းမီတာ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 35,000SQM Per လ
ဆိပ်ကမ်း: NINGBO, ရှန်ဟိုင်း, etc
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, PayPal, Western Union, etc
အပူလွှဲပြောင်းစီးရီး photoluminescent Self-ကော်ရုပ်ရှင် Minhui ပူအရည်ပျော်နှင့်အတူရောနှောနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့်စထရွန်တီ aluminate ဖြာထွက်ခြယ်ပစ္စည်းကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်အထည်နှင့်အထည်ချုပ်အလှဆင်အပေါ်ပူစိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သောအရာလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။
အပူလွှဲပြောင်းစီးရီး Photoluminescent Self-ကော်ရုပ်ရှင်စာရင်း
(မီလီမီတာ) Szie Afterglow မုန်တိုင်းအဆင့်
(mcd / ㎡) ပုံပန်းသဏ္ဍာန်
10 မိနစ် 60min
TF-G150 0,17 0.61M * 10 သိန်းကျော်ရရှိထားပါသည် > 150 > 20
ပူပြင်းစိုင်းနေဖြင့်အားကစားအဖွဲ့ကယူနီဖောင်း, လိုဂို, တစ်ခုတည်းသောပုံစံ, အဝတ်အထည်နှင့်အထည်ချုပ်အလှဆင်ဘို့အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောပုံနှိပ်အလွှာ၏အရောင်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖုံးအုပ်ပါဝါဖြင့်ကန့်သတ်မရအထည်အလိပ်ထည်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့အသင့်လျော် 1. Excellent ကအပူလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်, ။
ပွတ်တိုက်မှ 2.Resistance, လက်ရေဆေး, စက်လက်ဆေးခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကိုနှင့်အတူဆေးကြောနိုင်ပါတယ်ကျိုးပဲ့မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာ unglued ထံသို့လာကြ၏။
ထွင်းခြင်းနှင့်လက်ထွင်းထု 3. စက်နှစ်ဦးစလုံးနေမှုကိုချေဖျက်နိုင်ပါတယ်သင့်လျော်သော, အပူလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်သံဖြစ်ကြသည်။
ဒီထုတ်ကုန်များ၏ 4.The ကုန်ကြမ်းအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း, အရေပြားနှင့်အတူအသားအရေရန်မထိခိုက်ဆက်သွယ်ပါလျှင်အဘယ်သူမျှမအီလည်းမရှိ။
5. ဖြာထွက်အရောင်တောက်ပ, သတ်မှတ်ချက်နှင့်ရှုထောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ယခင်: ဖြာထွက် PVC တင်းကျပ်စာရွက်
နောက်တစ်ခု: self-ကော် acrylic ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Photoluminescent PVC ကိုယ်ပိုင်ကော်ဗီနိုင်း
ဖုန်းနံပါတ်: +86 579 88948789
ဖက်စ်: +86 579 88948948
Zhejiang Minhui အလင်းအားနည်းပညာကုမ္ပဏီ ...
ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာ Advertising ကြော်ငြာ Techno ...
Zhejiang Minghui အလင်းအားနည်းပညာ Co. , ။ , ...
Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ•အထည်အလိပ်သည် , Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူအလင်းအား, Photoluminescent အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Exit ကိုသင်္ကေတပြ, Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Msds, Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Paint,
Annie Zhang က
သူ Mike Xu